IMotorola iyakusungula ifowuni esongelayo ukuphela konyaka | I-Androidsis
I-2019 iya kuba ngunyaka wokusonga ii-smartphones. Le yinto icacile kule veki iphelileyo, kunye neemodeli ezintsha zeli candelo njenge Huawei Mate X okanye Galaxy Fold. Uninzi lweemveliso ezininzi ngoku zisebenza ngokwazo ukusonga ii-smartphones. Le yimeko yeempawu ezithile ezinje imbeko o Alcatel, esele zisinike ulwazi malunga nayo. Kwakhona iMotorola isebenza kwifowuni enokusongelwa.
Zenzele IMotorola iqinisekisile ukuba bayasebenza kwifowuni yokusonga. Kwimeko yakhe, umenzi uthe isixhobo sakhe sinokufikelela kwintengiso kulo nyaka. Nangona okwangoku akuqinisekanga ngokupheleleyo ukuba iza kufika ngo-2019.
Ukongeza, inkampani iqinisekisile ukuba kudala besebenza kwizinto ezisongelayo. Kodwa ukuba isixhobo bayasilungiselela iya kwahluka kwiimodeli zeSamsung kunye neHuawei thaca kule veki iphelileyo. Kule meko, umahluko ophambili uya kuhlala kwiscreen, esinokusongwa sibe sisiqingatha. Kanye nangaphakathi xa isixhobo sivaliwe.
IMotorola iphinde ithi ifowuni yayo iya kudityaniswa. Nangona inkampani ngoku isebenza kwiiprototypes ezininzi. Kuba banemodeli enehenjisi ephindwe kabini kuphuhliso apho kukho iscreen esinye esisonga kabini. Kodwa kubonakala ngathi le modeli ayisokhetho lokuqala.
Into icace gca kukuba i-Motorola icacile lonto Bafuna ukumilisela iimodeli ezisongekileyo kwintengiso. Kodwa azikho kungxamile njengamanye amanqaku ukuya kwintengiso. Ke kuyakufuneka silinde iinyanga ezimbalwa ukumiliselwa kwayo. Isizathu siyafana nezinye iimveliso ezinje ngeNhlonipho okanye ngeAlcatel.
Ngelixa amathandabuzo ahleliyo malunga nokumiliselwa okunokubakho okusongekayo kweMoto RAZR, apho kuye kwakho ukuvuza okuninzi. Okwangoku akukho siqinisekiso malunga noku. Ke kuyakufuneka silinde kwaye sibone ukuba ngaba singayilinda na le fowuni kuye okanye hayi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Motorola » IMotorola iyangqina ukuba iya kuba nefowuni enokusongwa